Iva Wako Domain! | Martech Zone
Iva Wako Domain!
Muvhuro, Ndira 8, 2007 Chipiri, April 5, 2016 Douglas Karr
Chimwe chezvinhu zvitsva zve Blogger ndeyekuti iwe unokwanisa kuitisa iyo application pane yako domain. (Ndakaona kuti vanopa vachishandisa yako Akaunti yeGoogle kupinda papuratifomu nyowani, futi. Zvakanaka). WordPress yakapa kuitisa yako blog, kugadzirisa yako theme, kuwedzera plugins, nezvimwe kwenguva yakati rebei ikozvino. Ini ndinotenda ndicho chimwe chezvakakosha zvikonzero nei ndakasarudza WordPress… ini ndaida kuve neyangu duraini.
Dambudziko kutanga blog rako uye nekumhanyisa pane imwe yemapuratifomu, izwi, typepad, blogger, kana Wordpress, ndeyekuti ndevako traffic yako, kwete iwe. Iwe unovimba nemaseva avo, yavo chikuva shanduko, yavo yekuzorora nguva, zvese! Chinhu chega chauinacho izwi rako.
Iyo haisi nyaya hombe kana iwe uchingoda kuchengeta bhuku kunze uko. Asi kuchinja pfungwa dzako pasi pemugwagwa nekufunga kuti iwe unoda kuve wakakomba nezve blogging, pamwe tora kushambadzira, nezvimwe, uye fungidzira chii? Wakamira… ese makuru mainjini ekutsvaga izvozvi ane izwi rako (zvemukati) zvakarongedzwa kune mumwe munhu webhusaiti. Izvi zvinoreva kuti ndeavo traffic, kwete iwe.
Uye chii chinoitika kana vakakwira mudumbu? Ko kana yavo sevha mashandiro kana software zvikatyisa zvisingatsanangurike zvinotyisa zvekuti unoda kuvasiya. Neraki, iwe unogona kutora zvawatumira nazvo asi, zvinosuwisa, haugone kutora yako yekutsvaga injini indexing. Izvo zvinogona kukuisa kumashure kwevhiki nemwedzi paunenge wakamirira kune wese munhu kunongedza saiti yako uye kugadzirisa zvese zvavanotaura kune yako saiti. Vhiki ino, ndakaendesa saiti yangu kune imwe account, uye zvese zvinongedzo zvangu uye mitsva yekutsvaga inoramba ichishanda sezvavaimboita kare. Ini ndaikurudzirawo kushandisa yechigarire chinongedzo dhizaini kuti kana iwe ukaenda kune imwe chikuva, unogona kuchengetedza yako link chimiro.
Zano rangu kune vatsva mabloggi?
Ive wega blog yako dura! Usatomborega yako 'techy' kuinyoresa iwe. Iwe unofanirwa kuve wega, unofanirwa kuimutsiridza, iwe unofanirwa kuichengeta. Kuva nedomain kwakafanana nekuva neyako kero yemugwagwa, iwe ungaisa iyo real estate muzita remumwe munhu? Sei iwe uchigona kuzviita nebhizinesi rako kana yako blog?
Zano rangu kumablogging mapuratifomu?
Ipa zita sevha masevhisi. Izvi zvaizondibvumidza kunyoresa zita rezita nemunyori wandinoda, asi nongedza zita rangu server kunzvimbo yako. Kana ndikafunga kutamisa bhurogu yangu kana saiti kune imwe inomiririra, ini ndinogona kungofambisa saiti yangu uye kugadzirisa zita rangu server. Izvi zvinogona kuve 'mubhadharo wekushandisa' modhi futi. Ini ndaizodzivirira mazita ekuremekedza zita rezita sezvo ivo vachigona kuve marwadzo muchiuno uye iwe unofanirwa kuwedzera mhando dzese dzekutsigira nekubatanidzwa kune yako saiti. Asi kuve neinzvimbo yedura server inonongedza http://mydomain.com kune http://mydomain.theirdomain.com iri nyore.
Tags: inotongwainotongwa zitaive yako zita renzvimbo
Direct Mail iyo Inoshanda!
Ndinobvuma zvachose, Douglas. Sei uchipa kutonga kwezviri mukati iwe kusikwa kune mumwe munhu?
Ini ndinorangarira pandaifanirwa kubhadhara madhora makumi manomwe nemaviri kune yangu yekutanga domain, asi mazuva ano mutengo hausi chikonzero chaicho chekusawana yako domain. Uye kuchine mazita akawanda ekugadzira anowanikwa. (Uye izvo zvinongobva mukutsvagisa kwangu-kwemasikati…).
Pane chinyorwa chakasiyana zvachose, sezvo iwe uchitaura bhizinesi modhi yevanopa mabhurogi papuratifomu; Ndagara ndichizvibvunza: WordPress inoita sei mari? Ingori mipiro, uye zvinonyatsoshanda here?
Ndinoshamiswa nechokwadi chokuti muridzi wewikipedia anoramba kuva nemabhanari ads panzvimbo yavo. Respect!
Jan 9, 2007 na2:01 PM
Ndapinda mudambudziko rekunonoka kuwana domain name. Chikonzero chandakatenga zita rangu remazita ndechekuti ndaida kuedza zvimwe. Zvisinei hazvo ndakanzwa kurwadza kwekufamba.
Pane fantastic post paShards of Consciousness pamatanho ekutora kufambisa yako WordPress blog kune yayo dura!
Ndatenda nekutaura kune yangu post, Doug. Ndinozvitenda.
Ini ndiri muchibvumirano chakazara nezve kuva neyako yako domain nekukurumidza kana zvisiri kubva pakutanga kwekubloga. Iwe unovhura zvimwe zvakawanda sarudzo iwe pachako. Uye zvinhu zviri kuwedzera kukura. Unogona kutanga kuyedza kuti uone kana uchichifarira, uye saka shandisa chikuva chemumwe munhu. Asi kana ukaona kuti unorifarira uye uchida rusununguko rwakawanda, wakakoka basa rakawanda kwauri uye nemimwe mibairo yawakataura nezvayo.